Ikhosi ye-Global Mapper kunye ne-3 engaphezulu enikwa yi-Civile-Geofumadas
Ikhosi ye-Global Mapper kunye ne-3 engaphezulu enikwa nguCivile
NgoFebruwari, 2013 Ukufundisa i-CAD / GIS, UkuCwangciswa kweziThili
I-Civile yinkampani enikezela ngeenkonzo ezahlukeneyo zokubonisana kunye noqeqesho kwimanyano neminye imibutho kwicandelo, kwimiba enje ngophuhliso lweeprojekthi zobunjineli, ucwangciso lokusetyenziswa komhlaba nokusingqongileyo. Kule meko sibonisa ubuncinci iikhosi ezi-4 eziza kuqala, zonke ziya kubanjelwa eSeville:
IMODEL OF FLOWS, MODFLOW
Olu luhlobo lwenkampu yokufanisa imodeli kwiimidiya eziphathekayo.
Umhla: 13, 14 kunye ne-15 kaFebhuwari 2013.
Abasebenzi abafundisayo: Enrique Oromendia de la Fuenta, UMlawuli oLawulayo weMiliarium.com kunye nePrimeile Princepes, SL (Indlela, Isitayile kunye neNjineli yePort - iDiploma kwiHydrogeology).
I-ARIETE HIT NGENKQUBO YO-ALLIEVI
Iphakheji yekhompyutheni enomgomo oyintloko ukufanisa ukuhamba kwexesha elidlulileyo kwinkqubo ye-hydraulic phantsi kwengcinezelo.
Umhla: 11 kunye ne-12 ka-Ephreli 2013.
Abasebenzi abafundisayo: Jorge García-Serra García (Injineli yezoShishino - uNjingalwazi we-Hydraulic Engineering e-UPV) UVicent B. Espert Alemany (Injineli yezoShishino-uNjingalwazi we-Hydraulic Engineering e-UPV).
UKUHLOLA IZICWANGCISO ZEZICWANGCISO NEMICWANGCISO YEZICWANGCISO ZEZICWANGCISO
Ukuzingela, kufuneka kube noCwangciso loBuchule bokuHlola. Ukulawulwa kwamahlathi kukucwangciswa kwezenzo eziza kwenziwa kwintaba ngexesha elitshintshayo, ukwenzela ukufezekisa iinjongo zomnini walo kunye nokwanelisa iimfuno zoluntu.
Umhla: 4 kunye ne-5 kaMatshi. 2013.
Abasebenzi abafundisayo: U-vlvaro Trujillo Díez (Injineli yeHlathi - iOfisi yezobuchwepheshe ye-Andalusian Hunting Federation). UAndrea Román Sánchez (Injineli yamaHlathi - umsebenzi ozinzileyo kunye nochwephesha wecandelo loLungiso kunye noLawulo lweNdawo yeNdalo esingqongileyo kunye naManzi.
I-Global Mapper yiyo sicelo esinamandla Idibanisa uluhlu olupheleleyo lwezinto zokusetyenziswa kwedatha kunye nokufikelela kwiifom zeedata ezingakaze zenziwe.
Ukuphuhliswa kwabafundi be-GIS kunye nabangaphakathi, isofthiwe ephathekayo ifanelekile njengesixhobo sokulawula idatha ye-GIS, okanye njengokuzalisekisa i-GIS ekhoyo.
• Iinjineli zeGeodey kunye neKartography
• Injini yobuGcisa kwi-Topography
• Ilungu leQela lokuSebenza kwiZithuba zoLwazi lweSithuba seSpain (IDEE).
• Ilungu leMbutho wase-Spain weeNjineli kwiGeody and Cartography
• Ilungu leKholeji yaseburhulumenteni beeNjineli zobuGcisa ekuPhononongweni
Imfundo: I-Diploma Ukuvunyelwa kokugqitywa kwekhosi eqinisekisiweyo, kuba yimfuno ebalulekileyo yokufumana esi siqinisekiso, ukuya kwi-75% yeeklasi ezijongene nobuso kunye nokwenza yonke imisebenzi ekhethwe ngumqeqeshi ofanayo.
Iiseshoni zobuso nobuso: I-14 kunye ne-15 ukususela ngo-Matshi ekuseni kunye nemini emva kweeyure ze-classroom ze-16 (i-8 ngosuku ngalunye). Shedyuli:
Ukusuka ngo-09: 30 ukuya ku-11: 30-Phumla- ukusuka ngo-12: 00 kuye ku-14: 30-Phumla- ukuqala ngo-16: 00 kuye ku-19: 30
Ukuqeqeshwa kwebala: Iyonke iiyure ze-48 zihanjiswa ngolu hlobo lulandelayo: 16 ngo-Matshi, i-18 ye-23 ngo-Matshi kunye ne-1 ye-5 ngo-Ephreli
(Ekude ukuqeqeshwa komfundi uya kukhululeka ukulungiselela umsebenzi wabo kunye nexesha elifanelekileyo utitshala uya kuba nako ukuphendula nayiphi na imibuzo enokuvela)
Ubunono: ubuncinane be-12 - abafundi abaphezulu be-25.
-I-420 euro Ukubhaliswa okuQhelekileyo
-Ii-370 zeerandi zeXabiso eliKhethekileyo
- Ama-euro angama-320 amaxabiso akhethekileyo kwiYunivesithi nakwiingasebenzi
(Faka izinto eziphathekayo, amaxwebhu kunye nokusetyenziswa kwekhompyutheni)
Ikhosi elixhasayo kwi-Tripartite Foundation
(Izaphulelo aziyi kusebenza kwiikhosi zebhonasi)
Ulwazi olungakumbi kunye nemibhalo:
(Ukubhalisa kude kube ngoMatshi 7 we-2013)
UAntonio Pablo Romero Gandullo - Ifowuni yoQhagamshelwano: 652954657 XNUMX XNUMX
INjineli yeeHlathi kunye neNjineli yeeNdlela, iziteshi kunye namachweba
Post edlulileyo«Ngaphambilini Yintoni enokubangela ukurhoxa kukaPopu Benedict
Post Next Into abazange bayitshoyo ngeemeteor yaseRashiyaOkulandelayo »